Seddex Dariiqo oo Lagu Xaqiijiyo Ka Qeyb Qaadashadaada Shaashadda Yar Yeelaneyso Saameyn Weyn | Martech Zone
Shaki kuma jiro in masiibada ay bedeshay dabeecadaha iibsiga macaamiisha iyo filashooyinka u horseedaya tafaariiqleyda si ay u helaan habab cusub oo ka wanaagsan oo ay kaga hawl galaan khadka tooska ah. Kordhinta qarashka ku baxa internetka ee sanadka 2020 - ilaa 44% laga bilaabo 2019 in ka badan $ 861 bilyan oo Mareykanka ah - waxaa jiray koror weyn oo ku yimid xulashooyinka fulinta internetka, oo leh 80% dukaamada iyagoo rajeynaya inay kordhiyaan adeegsiga Dukaanka-Iibsiga-Online-Pickup-In-Store (BOPIS) iyo qaadista dhinaca gees ka ah iyo 90% hadda waxay ka doorbidaan keenista guriga in ka badan booqashada dukaanka.
Macaamiisha ayaa ka xariifsan sidii waligeed markay tahay dukaamaysiga internetka iyo dukaamadan cusub ee soo kordhay ee maanta ee casriga ah ee ugu horreeya adduunka maanta waxay yeelan doontaa saameyn muddo dheer ah. Taasi waa sababta ay magacyadu u xaqiijinayaan in barta taabashadu ay tahay muuqaal-marka hore, dhakhso leh, oo aan cillad lahayn, iyadoo aan loo eegaynin meesha ay dhagaystayaashoodu iyo macaamiishoodu ku hawlan yihiin. Marka la eego taas ku dhowaad 80% dadka isticmaala taleefannada casriga ah hadda wax ku iibsaneyso aaladooda moobaylka, waxaa jirta fursad weyn oo wax loogu qaban karo aaladaha shaashadda yar yar ee macaamiisha.
Awoodda shaashadaha yar-yar waxay xambaarsan tahay faa'iidooyin aan sidaa u yareyn oo ay ku jiraan ka-qaybgal dheeraad ah, beddelaad, iyo daacadnimo sumcad-dheer. Calaamadaha waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan seddex isbeddel oo gaar ah - fiidiyow yar-yar, microbrowsers iyo moobiilka - si loo hubiyo inay si wax ku ool ah u gaarayaan tirada sii kordheysa ee macaamiisha internetka.
Ku mashquul Micro-Video
Da'da TikTok iyo Reels ee 'Instagram Reels', macaamiisha waxay yaqaanaan gooyo gaagaaban oo madadaalo ah ama macluumaad ku saabsan aaladooda moobaylka. Calaamadaha waa inay ka faa'iideystaan ​​isbeddelladan iyaga oo abuuraya fiidiyowyo fiidiyow ah oo si dhakhso leh u soo jiita dareenka daawadayaasha oo ka dhigaya kuwo faraxsan oo ku hawlan. Iyada oo ay ku jiraan dhawr ilbiriqsi oo kooban, magacyadu waxay gudbin karaan farriin soo jiidasho leh oo kordhinaysa aragtiyaha iyo beddelaadda.
Waxyaabaha yar yar ee fiidiyowga ahi waa 10 illaa 20 ilbidhiqsi oo dheeri ah, taas oo macnaheedu yahay in magacyadu leeyihiin waqti gaaban si loo hubiyo in koodhadh walba loo dhiibo si aan toos ahayn iyo awooddooda buuxda. Si tan loo gaaro, magacyadu waa inay marka hore hubiyaan in waxyaabaha ku jira ay hagaajinayaan inay buuxiyaan shaashadda qalab kasta, ha ahaato kombuyuutar desktop ah, kiniin ama taleefanka gacanta. Dhammaan waxyaabaha ku jira waa in sidoo kale lagu hagaajiyaa sawirka ama muuqaalka si looga fogaado cabbirka ma guurtada ah ee jebin kara qaabeynta bogga, qalloocinaya sawirka ama soo bandhigi kara baararka madow ee fiidiyowga ah. Suuqleyda iyo horumariyayaashu waxay adeegsan karaan AI iyo awooda barashada mashiinka si ay si hufan ugu abuuraan noocyo badan oo fiidiyow kasta oo loogu baahan yahay cabir shaashad kasta, hanuuninta iyo aaladda.
Intaa waxaa sii dheer, suuqleyda iyo horumariyeyaashu waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan qoraalka la xiriira fiidiyow kasta, oo ay ku jiraan cinwaanka iyo cinwaanada hoose. Kuwani waa dhinacyada muhiimka ah ee ka kooban mawduucyada siinaya macnaha daawadayaasha, gaar ahaan tan 85% waxyaabaha ka kooban fiidiyowga laga daawaday Facebook waxaa loo arkaa bilaa dhawaaq. Intaa waxaa sii dheer, bixinta subtitles sax ah ayaa muhiim u ah in la waafajiyo marin u helka iyo tilmaamaha ADA. Adeegsiga AI sidoo kale wuxuu si otomaatig ah u abuuri karaa qoraal wuxuuna codsan karaa qoraalada fiidiyo kasta.
Lahaanshaha Awoodda Microbrowsers
Microbrowsers waa horudhaca yar ee bogga ku soo badanaya doodaha barnaamijyada fariimaha gaarka loo leeyahay sida Slack, WhatsApp iyo Facebook Messenger. Tusaale ahaan, ka fikir markii aad u soo dirtay hooyadaada xiriiriyaha 'iMessage' ee kabaha kabaha liiska dhalashadaada dhalashada. Websaydhka tafaariiqdu wuxuu si otomaatig ah u soo saaraa sawir yar oo muuqaal ah ama muuqaal fiidiyoow ah. Tani waxay ka caawineysaa iyada inay aragto waxa xiriirku yahay waxayna dhistaa aragti wanaagsan oo ugu horreysa astaanta, iyadoo kordhinaysa suurtagalnimada inay gujiso oo ay iibsato kabahaas hadiyad ahaan.
Xiriiriyayaashan microbrowser waxay bixiyaan fursad wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo calaamadaha nasiib darro badiyaa iska indhatiraan. Noocyadu waa inay hubiyaan in sawirradan horudhaca ah ama fiidiyowyadu ay sifiican uga muuqdaan dhammaan barnaamijyada wada sheekaysiga iyo fariimaha, iyo sidoo kale dabada dheer ee shaashadaha kale sida aaladaha ciyaarta gacanta iyo qalabka casriga ah.
Horumariyayaashu waa inay hubiyaan in xiriiriyayaashu ay ka dhex muuqanayaan microbrowsers-ka iyagoo:
Sharaxaadda wax kasta oo ku saabsan calaamadda HTML, oo ​​ku xaddid cinwaanka 10 erey iyo sharraxaadda 240 xaraf
Had iyo jeer isticmaal Open Graph si aad u calaamadeysato xisaabaadka microbrowsers kala duwan
Xulashada sawir gaar ah oo aan daahfurneyn oo muuqaal ahaan soo jiidanaya kuna qasbaya qaataha inuu gujiyo wixii macluumaad dheeraad ah
Adoo adeegsanaya fiidiyow gaagaaban "nanostories" oo loogu talagalay microbrowsers-ka yar ee hadda muujiya fiidiyaha
Adoo raacaya talooyinkan, magacyadu waxay ka faa'iideysan karaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin microbrowser-ka waxayna kaxeyn karaan talooyinka isku faca ah ee u horseedaya qasabno iyo iibin. Intaa waxaa sii dheer, waxay u adeegsan karaan xogta si ay u bixiyaan aragtiyo ku saabsan qaababka dhagaystayaasha iyo dookhyada, iyo sidoo kale inta taraafikada ay ka imaanayso tixraaca asxaabta, ama "mugdiga bulshada." Baaskiilkan aan tooska ahayn ee loo yaqaan 'microbrowser traffic' ayaa fursad dahabi ah u ah suuqleyda - xog badan oo ay ka hayaan cidda wadaagaysa xiriiriyeyaasha saamiyada gaarka ah iyo wada sheekaysiga kooxeed, intay sii kordhinayaan ayay ka kooban yihiin iyo awoodda gudbinta.
Ka dhig Goob-Dhaqdhaqaaqa-saaxiibtinimo
Maaddaama macaamiishu ay ku tiirsan yihiin wax ka iibsiga internetka iyo in ka badan, waxay noqotay mid xitaa muhiim u ah noocyada si ay u soo bandhigaan mareegaha warbaahinta hodanka ku ah oo si fiican ugu rarta aaladda moobaylka. Macaamiishu waxay raadinayaan khibrad soo jiidasho leh oo toos ah oo dhakhso leh oo wax ka qabata. Ma sugi doonaan hareerahooda illaa bogg ay rartaan. Xaqiiqdii, dib u dhac hal sekan ah jawaabta bogga waxay sababi kartaa a 16 boqolkiiba ayaa hoos u dhacay qancinta macaamiisha.
Astaamaha waa inay diiradda saaraan tayada, qaabka iyo cabirka hantidooda dijitaalka ah si ay uga dhabeeyaan waxyaabaha laga filayo. Sawirada, horumariyeyaashu waa inay cabir uyeelaan sawirada cabirka qaabeynta gaarka ah, iyagoo laxiriiraya cabirka, xallinta iyo qaabeynta si ay uguhaboonaato deegaanka arjiga. Heerarka isku midka ah ayaa lagu dabaqayaa fiidiyowga, iyada oo waliba la tixgelinayo tayada fiidiyowga si loogu meeleeyo xaaladaha shabakadaha isticmaalaha. Adoo ka dhigaya websaydhka mobiil-saaxiibtinimo, magacyadu waxay ku kalsoonaan karaan in isticmaaleyaashu ay ku raaxeysan doonaan khibrad dukaamaysi oo khadka tooska ah oo aan muran lahayn oo kaxeeya taraafikada iyo iibka.
Natiijooyin waaweyn ayaa ka yimid faahfaahin yar
Waxay noqotay mid muhiim u ah calaamadaha inay si fiican u eegaan istiraatiijiyadooda shaashadda yar ayna hubiyaan inay wax u qabanayaan dadka isticmaala mobilada. Ku darista fiidiyow-yar-yar, microbrowser, iyo hab-dhaqameedka ugu wanaagsan ee moobiilka ayaa fure u noqon doona la kulanka rajooyinka macaamiisha maanta ee internetka iyo ku guuleysiga natiijooyin waaweyn adduunka moobiilka.
Tags: ai videofacebook facebookReels Instagrammicro-daalacashadafiidiyow-yaryar-yar video clipmicrobrowsershawlgelinta mobiladahagaajinta mobiladaxawaaraha bogga boggataleefanka gacantaxawaaraha mobiladafiidiyaha gacantamobiil-saaxiibtinimoxawaaraha boggajawaabvideo gaabandebcinshaashad yarTikTokqaab videoqaabka muuqaalkacabbirka fiidiyowgaWhatsApp
Iyadoo 20 sano oo khibrad ah u leh suuqgeynta, Juli wuxuu madax ka yahay isgaarsiinta caalamiga ah ee Cloudinary iyo barnaamijka suuqgeynta macaamiisha. Kahor intaysan ku biirin Cloudinary, Juli waxay socodsiisay latalinteeda suuq geyn isku dhafan halkaasoo ay ku horumarisay kuna fulisay barnaamijyo suuqgeyn guul leh oo loogu talagalay shirkadaha tikniyoolajiyadda iyo daryeelka caafimaadka iyo kuwa aan macaash doonka ahayn, iyadoo maareynaysa wax kasta oo ka imanaya sumadda iyo PR illaa suuq-geynta iyo dhacdooyinka.